မယ့်ကိုး: “ ချစ်သောသူသို့အကြောင်းကြားပါသည်... ”
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 8/08/2009 07:24:00 AM
8/8/09 8:29 AM
(ဝန်ခံချင်တာက - ချစ်ခြင်းတစ်ခုကို ဖတ်ပြီး ကျွန်မကို သိပ်ချစ်တတ်တယ်လို့မထင်ပါနဲ့ ။ ကျွန်မ နည်းနည်းလေးမှ မချစ်တတ်ဘူး။ )တူလိုက်တာ မမမယ်ရဲ့ ..Vista ကတော. လူထက်တိရစာန်တွေပိုချစ်တယ် ။လူတွေတော.မေတ္တာထားပါတယ် ..အဲလိုတော.မချစ်တတ်ဘူး ..မှန်လိုပဲကျင့်သုံးတယ် သူချစ်မှကိုချစ်မှာပေါ.
8/8/09 8:40 AM
အေးစက်စက် ဧကစာရီ၊ နောက်အပြင်မှာတွေ့ရင်
Assignment တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေတဲ့သူကို နှိပ်စက်သလို ဖြစ်သွားတယ်၊
အားလုံးကို ဘဝင်တကျနဲ့ ဖတ်လာခဲ့တာပဲ..
နောက်ဆုံး “ဝန်ခံချင်တာက” ကျမှ ဘဝင်က မကျဘူး ဖြစ်သွားတယ်...
ချစ်ခြင်းတစ်ခု ကပဲ ပီပြင်လွန်းလို့လား မသိ..
ခုတော့ လုံးလုံးကြီးကို ဝန်ခံထားတာ “မချစ်တတ်ဘူး” တဲ့..
ဘယ်လို နားလည်ရမယ် မသိတော့ဘူး မယ်ကိုးရယ်..
မဟုတ်မှ လွဲရော လိမ်ပြောနေတာ များလား.....းP
8/8/09 9:30 AM
8/8/09 10:03 AM
မချစ်တတ်ဘူး ဆိုပါလား... ဘုရား ဘုရား...
မသေချင်သေးဘူးဆိုတော့ အင်း... လုပ်စရာတွေ ကျန်နေလို့ပေါ့နော်။
ဖြစ်တတ်ပါတယ် လူနဲ့စာဆိုတာက တူတာမှမဟုတ်တာ
ကိုယ်လည်း မလွမ်းတတ်ဘူးလေး))
8/8/09 12:36 PM
ပို့စ် မော်ဒန် ကဗျာတပုဒ် ရလေမလားလို့
8/8/09 2:19 PM
ဟိဟိ ညီမက အခုမှ တင်မလို့လုပ်တုံး ဟားးဟားးးးး ဒါလေး သဘောကျတယ်
ဖြစ်ချင်နေတာက - အာဇာနည်မဖြစ်နိုင်မှန်းသိလည်း သူရဲကောင်းအဖြစ် စိတ်ကူးယဉ်ချင်သေး...
ဒါလေး ဖတ်ပြီးတော့ ဘာသွားမြင်လဲ သိလား အဆိုတော် အာဇာနည် ကို ပြေးမြင်တယ် ပြီးမှ အာ... မဟုတ်သေးပါဘူး ဆိုပြီး အဟီးးးးး ရယ်လိုက်ရတာ ကိုယ့်ဟာကို ကြိတ်ပြီးတော့
မချစ်တတ်သေးတာ ကောင်းပါတယ် မမ လူဆိုတာ အတ္တမျိုးပဲလေ ကိုယ့်ကိုယ်ကလွဲရင် သိပ်မချစ်တတ်ကြဘူးလေ ဒါဆိုရင်တော့ လေးစားတယ် မမ မချစ်တတ်ပဲနဲ့ ချစ်ခြင်းနဲ့တွေ့ဆုံခြင်း ဝတ္ထုရှည်ကို ဖတ်တီးတဲ့ မမ အင်းးး နောက်အပြင်မှာ တွေ့ရင် ဗျူးဦးမယ် ရှောင်မပြေးနဲ့နော် သိလား ဟားဟားးးးးးးးးးးး ဘိုင်
အားလုံးကောင်းပါတယ် မကြီးရာ ... ဒါပေမဲ.
နောက်ဆုံး တစ်ခုက တကယ်ကြီးလားဟ ... အနော်
တော. ယုံပါဘူးဗျာ :P
မမမယ်ကိုး ရေ ... အချစ်ခံရတဲ့သူတွေထဲမှာ နှင်း လဲပါတယ်နော် ...။ကဗျာလေးက အ၇မ်းကောင်းသလို လေးနက်မှုရှိတယ် .... ခံစားချက်လေးတွေ လာတူနေပြန်တယ် ....။ ပျော်ရွှင်ပါစေ မမမယ်ကိုး ....။
ကျနော့်နဲ့ တစ်ထပ်တည်းပဲ အစ်မ :D
ပြောနေကျ စကားထပ်ပြောရဦးမယ် အစ်မ စာတွေ သိပ်အားကောင်းတယ် စကားလုံး တွေက ထိတယ် .........
ဘီလူးတွေ ကြီးစိုးတဲ့မြို့ တော်။ သွေးညှီန့ံတွေ ပြွန်းနေတဲ့မြေကို ကျနော်လည်းဆန္ဒမရှိရပါ
ဖတ်ဖူးသမျှ ခုတလောတွေမှာ အစ်မရေးတဲ့ ခုတလောက အလန်းဆုံးပဲ စာသားလေးတွေ တိုတိုလေးနဲ့သိပ်စားတယ်
နည်းနည်းလေးမှမချစ်တတ်ဘူးဆိုတာကို လုံးဝ(လုံးဝ) မယုံပါ :P
8/8/09 3:56 PM
8/8/09 5:23 PM
ချစ်နေတာက - အခုစာဖတ်သူကိုပေါ့ :P
အေးပေါ့လေ.. ကိုယ်ကတော့ တစ်ဆယ့်ခြောက်
ယောက်မြောက် အချစ်ခံရတဲ့သူဖြစ်သွားပြီ..ရှိပါစေ ရပါတယ်.....
ချစ်အကြောင်းရေးတိုင်း ကျွန်မကို ချစ်တတ်တယ်လို့ မထင်နဲ့တဲ့.. သေဘီဆရာဘဲ ပြောလိုက်ချင်တယ်
8/8/09 7:09 PM
စာလာ ဖတ်မိလို့ တော်သေးတယ်
တော်ကြာ ကိုးကိုး ချစ်တဲ့ အထဲ မပါပဲနေအုံးမယ်... အဟိ...
ကျနော်ကတော့ သေချင်တယ် အော်မိမယ်ထင်တယ်...း)
တက်ဂ်ပိုစ့်လေးက တောင်ဖတ်ကောင်းနေရော ကိုးကိုးရေးး
8/8/09 8:29 PM
8/8/09 10:06 PM
နာမ်ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူး ဆိုတော့ "စိတ်ကျန်းမာရေး" ဆိုတာမျိုးကို ပြောတာလားးP
မချစ်တတ်ဘူးဆိုလို့ လာလည်ရတာလဲ ခပ်လန့်လန့်ရယ်...
8/8/09 10:36 PM
9/8/09 1:15 AM
အဲ.. ရေးပြီးသွားပြီ.. မြန်လိုက်တာ
အလုပ်တွေ အဆင်ပြေပါစေ ;)
ဘဝတူတဲ့ ကြောင်လေးတွေတဲ့၊ နေစရာထိုင်စရာ အဆင်မပြေဘူးလား?
9/8/09 3:45 AM
ပျော်တော်ဆက်သီချင်းကို အကိုကြိုက်တာ စကြားဖူးကတည်းက
9/8/09 4:26 AM
အချစ်ခံရသူထဲမှာ ပါတယ်ဆိုတာ သေချာအောင် ခြေရာချသွားခဲ့တယ်
အဆုံးမဲ့ ချစ်တဲ့ မယ်မယ်ကိုး ..
စာလာဖတ်တယ် .. ဟိ
ကောင်းခြင်း အခါသမယလေး ဖြစ်ပါစေ
9/8/09 6:57 PM
ခုတလော တက်ဂ်ပိုစ့်မှာလေ ဒေါ်လေးမိုးကယ်ရယ် ကိုဂျီးလူထွေးရယ်ကို အကြိုက်ဆုံးပဲဗျာ။ =)
10/8/09 3:33 AM
10/8/09 5:04 AM
အချစ်ခံချင်သူများကို စာလာဖတ်ဖို့ ညွှန်းလိုက်ပါ့မယ်...
မေတ္တာကို ဆိုလိုသည်...းP
16/8/09 3:51 AM